Banyere kaadị ebe nchekwa y online
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị ize ndụ na ndiọk data ies na ike-mere mgbe ọ na-abịa online SD kaadị ma ọ bụ na kaadị ebe nchekwa y. Chere ngwá ọrụ na yiri usoro ndị adịghị ma ka na ndị na-ike-achọ bụ ndị na-emezu imebi okwukwe data na ozi nkeonwe nke onye ọrụ na nke a. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na SD kaadị y mmemme na-downloadable na arụnyere na n'elu usoro na-mgbe-atụ aro ka ha na-eme n'aka na nzuzo na mkpokọta data ike n'ezi na-echebe na niile ụgwọ. Ọ bụ ya mere ukwuu tụrụ aro adịghị mgbe o jiri online omume na dị na nke a dị ka ha ga-ọ bụghị nanị na-esi onye ọrụ n'ime nke ma ga-emekwa ka n'aka na ihe kasị mma ọrụ na-mgbe nyere na nke a. Na kaadị ebe nchekwa y online mere kwesịrị ga-ezere onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka ghara iji ya na.
Nsogbu okosobode na-eji SD kaadị
E nwere ọtụtụ mbipụta na onye ọrụ nwere ike na-eche ihu mgbe ọ na-abịa SD kaadị ojiji na ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ndị na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime ikpe na nke a nke nwere ike na-ezute oké data ọnwụ ahụ dị ka ọma:
1. Ị kaadị
Ọ bụ-ahụ kwuru na ọ bụrụ na SD kaadị Ị n'ihi ihe ọ bụla mgbe ahụ na-enweghị kasị mma na ndị kasị eji ngwaọrụ onye ọrụ ga-enwe ike ka data na ala na afọ ojuju. Ọ bụ ya mere ndị mbụ na ndị isi nke na ike na-ihu site SD kaadị ọrụ.
2. ekwesịghị Ekwesị data transfer
Ọ na-ahuta ka mmadụ mbipụta na-metụtara data ọnwụ na nke pụrụ ịkpata nke na-eji SD kaadị. Ọ na-gwara iji jide n'aka na data transfer ma si na SD kaadị mgbe niile kwesịrị-mere dị ka kwa ụkpụrụ nke mere na onye ọrụ dịghị nke na data-anọgide n'ebe ahụ na kaadị oghere.
Bụ n'ebe ọ bụla online SD kaadị y ngwá ọrụ?
E nwere ọtụtụ ihe n'ihi na nke e nweghị online SD kaadị ngwá ọrụ dị na ọtụtụ n'ime ihe ndị mere na-metụtara ụdị nke data. Ezie na azịza bụ nnukwu NO-esonụ bụ ihe ndị mere na-metụtara ihe iseokwu nke dịghị SD kaadị y ngwá ọrụ online:
1. Data ikwere
Ọ bụ-ahụ kwuru na data na-abụghị nanị mie ma onye ọmụma nwekwara ike na-akọrọ mfe ma ọ bụrụ na online SD kaadị y ngwá ọrụ na-eji na nke a. Ọ bụ ya mere gwara na bụ otu ma ọ bụ abụọ online data mgbake omume ha kwesịrị dịghị mgbe a ga-eji na ọ bụla na-eri.
2. Data ike n'ezi ịghọta
The data ikwere bụ ihe nke ma ọ bụrụ na ọ na-dara n'ime ihe ọjọọ aka mgbe ahụ, ọ bụ n'ihi na n'aka na data eguzosi ike n'ezi ihe ịghọta enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. The hackers nwere ike iji onwe nkọwa ka ịnweta usoro nke iji na ọ ga-mere remotely na ala.
Ọghọm nke na-eji online ngwaọrụ ka onwe data
Ka e kwuru tupu nakwa na e nwere ọtụtụ iri puku ọghọm nke na-eji online y ngwá ọrụ na ụfọdụ n'ime ha na e kwuru dị ka n'okpuru iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma nsonaazụ site BỤGHỊ na iji online y ngwaọrụ:
1. Personal ọmụma na-ekere òkè
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị ọdachi ọghọm nke metụtara ndị online data mgbake. Saịtị na a na-eji nwere ike na-a oyiri nke ọmụma na e Ewepụtara na mgbe ahụ, ọ nwere ike na-akọrọ maka ego ndị ọzọ na ọbụna hackers. Ọ bụ ya mere dụrụ mgbe ka ojiji nke ọ bụla dị otú ngwá ọrụ n'oge ọ bụla na-eri.
2. ekwe omume nke na-ezighị ezi ojiji
The ọmụma na e weghachiri eweghachi nwekwara ike e ji mee ihe maka ihe ọjọọ na omume nile na na nke a onye ọrụ na-anọgide na-amaghị nke bụ eziokwu. Ọ bụkwa otu n'ime ọghọm nke eji online ngwá ọrụ na-kụda ojiji nke ọ bụla dị otú technology mgbe niile.
Olee otú gị SD kaadị n'enweghị nsogbu na ngwa ngwa?
Wondershare Data Recovery Bụ nanị ụzọ na nwere ike ime ka n'aka na needful a mere enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ bụkwa otu n'ime ndị na omume na-pụrụ ime ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na ndị kasị mma na-nyere ka onye ọrụ na okwu nke nzuzo na dị ka usoro ihe omume mgbe niile na-agba na offline mode mere ọ dịghị atụ egwu data ikwere nke ụdị ọ bụla. Ọ bụ ya mere gwara iji jide n'aka na ihe kasị mma na nke kasị uchu omume na-eji ị na-ahọrọ Wondershare Data Recovery dị ka ọ dịghị mgbe echekwa onye ọrụ data na na-na mmewere nke nzuzo nọgidesiri ike na niile ụgwọ enweghị ihe ọ bụla glitch. The metụtara usoro na bụ a ga-agbaso ka data na-e gosiputara ka n'okpuru nke mere na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ndibiat na nke a:
1. Site URL http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html usoro ihe omume a ga-ebudatara ma wụnye:
2. The faịlụ ụdị bụ mgbe ahụ na-ahọrọ:
3. Onye ọrụ mgbe ahụ kwesịrị iji jide n'aka na nke furu efu faịlụ ọnọdụ ahọrọ:
4. Mgbe mweghachi ahụ gasịrị onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na faịlụ na-i site ọkụkụ button:
Akwado data ụdị na ọnọdụ nke usoro ihe omume
E nwere 550+ formats na-akwado site na usoro ihe omume na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime ha:
Ọnọdụ ndị na-Wondershare Data Recovery nwere ike inyere aka
Mberede nhichapụ nke data
Na-ezighị ezi arụmọrụ
Iche ihe mere
Atụmatụ na iji Gbochie Data Izu
Na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime Atụmatụ na ga-agbasoriri iji jide n'aka na data na-ezu ohi na nke pụrụ ịkpata ọnwụ bụ gbochie:
m. The mwute data kwesịrị b nọ n'okpuru paswọọdụ nchebe ka bụ securer ma odi mfe.
ii. The onye data kwesịrị-ekwesị ehichapụ na onye ọrụ na nke a kwesịrị ime ka n'aka na kaadị na-formatted n'ime ngwaọrụ
III. The data izo ya ezo ngwa ga-eji jide n'aka na onye data anọgide nchebe niile ugboro
too ogologo. State nke nkà antivirus omume ga-eji.
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> Olee otú ime a online SD kaadị mgbake